Covid-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိရောအချစ်ရော ပေးလိုက်တဲ့ ယဉ်လတ် - Cele Gabar
ခုချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာပိုးတွေ့လူနာတွေ တဖြည်းဖြည်း ရှိလာလို့အားလုံး အရမ်းစိုးရိမ်ပြီးကြောက်နေကြတယ် ၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို စိတ်ပူကြတယ် ၊ စာလေးတွေရေးပြီး ဂရုစိုက်ဖို့ပြောကြတယ် ယဉ်လတ်လေးက ချစ်ရတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေတော့ အားလုံးကိုရည်ရွယ်ပြီး ဒီစာရှည်ရှည်လေးရေးပြီးတစ်ယောက်ချင်းစီကိုပြောချင်ပါတယ် လို့အစချီပြီး ပရိသတ်တွေကို သတိပေးစကား ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
ပထမဆုံး . .ကျွန်မတို့တွေက တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပြီး ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုပြန်မျှဝေကြမယ် ။ ကိုယ်တွင်း ခုခံအား ကောင်းမွန် တယ်ဆိုရင် တော်ရုံရောဂါမဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အပြင်ရောဂါကူးစက်ခံရရင်လည်း အလွယ်တကူပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့ အခုလို Covid နေ့ရက်တွေမှာ (တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်)အိမ်ထဲမှာနေပြီးခုခံအားကောင်းမွန်အောင်. ၁ -အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်မယ်၊ တစ်ညကို၇- ၉နာရီအိပ်စက်အနားယူမယ်။
၂ -ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာစားမယ်၊ ဗီတာမင်တွေများစွာရနိုင်တဲ့အရောင်စုံဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေများများစားပြီး ခုခံအားစနစ်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာနဲ့ဆိုဒါပါဝင်တဲ့ဖျော်ရည်တွေလျော့သောက်မယ်။
၃- လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြမယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ကိုယ်တွင်းသွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းမွန်ပြီးနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ်တွင်းအဆိပ်အတောက်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးခုခံအားစနစ်ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်။
၄ – တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်မယ်။ လက်ကိုမကြာခဏစင်ကြယ်အောင်ဆေးမယ်။လက်ကိုင်ဖုန်းကိုအရက်ပြန်နဲ့ဆေးမယ်။တစ်နေ့ ၂ခါရေချိုးမယ်။
၅ – စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ချမယ်။ အကြောက်လွန်နေတာ၊ fb ပေါ်ကစိတ်မချမ်းသာစရာသတင်းတွေ၊မကောင်းတဲ့commentတွေကြောင့်မိမိမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေရင် ကိုယ်တွင်းခုခံအားကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။သီချင်းဆိုကြမယ်၊စာဖတ်ကြမယ်၊ တီဗီကြည့်ကြမယ်၊တရားထိုင်ကြမယ်။ မေတ္တာပို့ပေးမယ် . .
၆ – ဆေးလိပ်ဖြတ်ရမယ်။ ( ဆေးလိပ် သောက်တတ်တဲ့သူအတွက်ပေါ့နော်)
ဆေးလိပ်သောက်တာကခုခံအားကိုအလွန်အားပျော့စေနိုင်ပါတယ်နော် ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ရင် ဖြတ်ပါနော်။
၇ – အကောင်းမြင်မယ်။ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဖုန်းပြောမယ်။chatting လုပ်မယ်။ ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ video call ပြောကြမယ်။ အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ရှိပြီးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများသူတွေကခုခံအားစနစ်ပိုသန်မာနိုင်ပါတယ်တဲ့
၈ – ဗီတာမင်D ရအောင်ယူမယ်။
နေရောင်ခြည်ကရရှိတဲ့ဗီတာမင်Dဟာခုခံအားစနစ်ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်။မနက်စောစောလမ်းလျောက်ကြမယ်။ (သုံးပေ ခွာ ပြီးတော့ပေါ့နော်)
၉ – အရက်လျော့သောက်မယ်။ (ဦးတို့အဓိက) အိမ်မှာနေရလို့ပျင်းပျင်းရှိအရက်ကြီးပဲသောက်မနေနဲ့ဦး။အရက်ပမာဏများများသောက်တာကခုခံအားစနစ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဝိုင်အနည်းငယ်သောက်ရမယ်။ခုခံအားစနစ်သန်မာနိုင်တယ်လို့ British journel of nutrition ကဖော်ပြထားလို့ပါ။
၁၀ – ဒိန်ချဉ်စားမယ်။သူ့မှာပါဝင်တဲ့လူ့အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားတွေကခုခံအားစနစ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတဲ့အတွက်ခုခံအားစနစ်သန်မာနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ဒေါက်တာ ခင်မိုးမိုး ပြောပြထားတဲ့အချက်လေးတွေကို သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေ အားလုံးအတွက် ပြန်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပြီး ဒီကလေး က ခင်ဗျားတို့အားလုံးကို ဂရုစိုက်ပေးမယ် အရင်ထက်ပိုချစ်ပေးမယ် နော် . .ဒီကာလကြီး တူတူရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ပြီးသွားရင်. အပြင်မှာတွေ့ပြီး ဓါတ်ပုံတွေ အများကြီး တူတူရိုက်ကြရအောင် နော်. .အားလုံးကျန်းမာပြီး ပျော်ရွှင်နေတာမျိုးပဲ မြင်ချင်တယ်ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကို ချွဲနေတဲ့ ယဉ်လတ်လေးရဲ့ အချစ်တွေကို Cele Gabar မှတဆင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source : Yin Lat